Ny fahazoana hotely Kambodia Raffles roa dia manampy amin'ny sehatra hotely Indochina | eTurboNews | Fironana | Travel News Online
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kambodza » Ny fahazoana hotely Kambodia Raffles roa dia manampy amin'ny sehatry ny hotely Indochina
Ny fahazoana hotely Kambodia Raffles roa dia manampy amin'ny sehatry ny hotely Indochina
Ny fahazoana ny Hotely Raffles dia manamarika ny fahazoana tovovavy voalohany ivelan'i Vietnam ary manampy amin'ny sehatra hotely Indochina. Hatramin'izao, Lodgis dia nahazo sy namolavola hotely malaza maro amina hotely amoron-dranomasina any Vietnam, ao anatin'izany ny Sofitel Legend Metropole 365 manan-danja ao Hanoi, hotely ambony fampisehoana any Vietnam ary laharana tsy tapaka ho iray amin'ireo hotely lehibe any Asia.
Ny eTN dia nifandray tamin'ny anaran'ny PR AGENCY mba hamela anay hanala ny rindrina fandoavam-bola ho an'ity fanambarana an-gazety ity. Tsy mbola nisy valiny. Noho izany dia ataonay ho an'ny mpamaky anay ity lahatsoratra vaovao ity ary manampy rindrambaiko iray izahay
Ny fahazoana ny Hotely Raffles dia manamarika ny fahazoana tovovavy voalohany ivelan'ny orinasa i Vietnam ary manampy amin'ny lozisialy hotely Indochina lohan'i Lodgis. Mandrak'androany, i Lodgis dia nahazo sy namolavola hotely malaza maro sy hotely amoron-dranomasina i Vietnam, ao anatin'izany ny Metropole Legend Sofitel Legend 365 ao Hanoi, trano fandraisam-bahiny malaza tampoka ao i Vietnam ary nalahatra tsy tapaka ho iray amin'ireo hotely lehibe ao Asia.
Lodgis Hospitality Holdings Pte. Ltd., sehatra fandraisana vahiny feno tohanan'ny Warburg Pincus sy VinaCapital, dia nanambara androany fa nahavita tamim-pahombiazana ny fahazoana hotely manan-tantara roa manan-tantara ao Kambodza, ny foibe Raffles Hotel Le Royal Phnom Penh ("Raffles Le Royal") sy ny Raffles Grand Hotel d'Angkor Siem Reap ("Raffles Grand d'Angkor") (miaraka amin'ny "Hotel Raffles"). Miaraka amin'ny fahazoana ny Hotely Raffles, i Lodgis dia manana trano fandraisam-bahiny manan-tantara lehibe indrindra any amin'ny faritra Indochina ary koa trano fandraisam-bahiny sy fitantanana hotely mitombo eo ambanin'ny marika Fusion.
Mipetraka ao Kambodza, ny Raffles Hotels dia tranobe manan-tantara tamin'ny taona 1930, izay naverina tamin'ny laoniny tanteraka ary nosokafana indray tamin'ny marika 'Raffles' malaza tamin'ny taona 1997. Ny Raffles Le Royal manana ny fanalahidin'ny 175 dia miorina eo afovoany ao an-drenivohitr'i Phnom Penh, mifanila amin'ny Masoivohon'i Etazonia ary akaikin'ny biraom-panjakana marobe, ny Royal Palace ary koa ny tsena afovoany. Ilay Raffles Grand d'Angkor manana tombo-kase 119 dia eo afovoan'ny Quarter frantsay taloha misy ny toerana haleha Siem Reap, ary 6km monja avy eo amin'ny toerana malaza an'ny UNESCO Heritage Heritage ao Angkor Wat, tsangambato ara-pivavahana lehibe indrindra manerantany.
Mba hitazomana ny hakanton'ny mpanjanatany Khmer-Francesa, ireo fananana roa ireo dia hanamboatra fanavaozana voafantina izay misy ny fanavaozana sy ny famelomana ireo efitrano fandraisam-bahiny sy ny toeram-pivarotana sakafo sy zava-pisotro ary koa ny fanavaozana ireo toeram-pivoriana sy ireo faritra hafa hanatsarana ny traikefan'ny vahiny ao amin'ny hotely.
Peter T. Meyer, Lehiben'ny Executive Executive ao amin'ny Lodgis, dia nilaza hoe: “Faly be izahay amin'ny fahazoana ireo hotely roa manan-tantara Raffles any Kambodza. Miaraka amin'ny Metropole ao Hanoi, Lodgis izao dia manana portfolio hotele lova Indochina tsy azo soloina izay ahafahantsika mahazo synergie manan-danja amin'ny marketing sy ny asa mba hanompoana tsara kokoa ny tsena fizahantany mivoatra haingana manerana an'i Indochina. Hitanay ny fahafaha-mitombo avo roa heny ho an'ny fananana roa miaraka amina programa fandaniam-bola lasibatra be hanovana ny trano fandraisam-bahiny hiverina amin'ny toerany lehibe. Noho ny fiarahanay miasa akaiky amin'ny Accor ary koa ny fahaizanay miasa mafy dia matoky izahay fa hamorona sanda maharitra ho an'i Lodgis ireo trano fandraisam-bahiny ary ho tsara toerana ho an'ny tsena Indochina amin'ny ankapobeny. ”
In 2017, Kambodza nandrakitra fahatongavan'ny mpitsidika iraisam-pirenena 5.6 tapitrisa, maneho ny fitomboana 11.8% isan-taona ao aorinan'ny CAGR 10 taona matanjaka mihoatra ny 10%. Phnom Penh ary Siem Reap nahasarika ny ampahany betsaka indrindra amin'ireo mpitsidika iraisampirenena ao amin'ny firenena izay nisy 49% sy 38% anjarany avy. Marihina fa mpizahatany sinoa maherin'ny 1 tapitrisa no nitsidika Kambodza amin'ny 2017, maneho ny fitomboana 45% isan-taona amin'ny fitomboana sy fanaovana Kambodza iray amin'ireo tsena mivoatra haingana indrindra ho an'ireo mpizahatany sinoa mivoaka ao Azia Atsimo atsinanana miaraka i Vietnam. Miaraka amin'ny fitomboan'ny sidina mivantana sy ny fanosehana mahery vaika ataon'ny governemanta mankany amin'ny fizahan-tany, antenaina ny hitohizan'ny indostria ny fiakarana mafy amin'ny taona 2018 miaraka amin'ireo mpitsidika iraisam-pirenena farafahakeliny 6 tapitrisa eo ambonin'ireo vinavina mpizahatany 15 tapitrisa novinavinaina 4 lavitrisa dolara amerikana amin'ny fidiram-bola. Ho fanampin'ny fizahan-tany dia nahatratra ny fampiasam-bola mivantana avy any ivelany 6.3 lavitrisa dolara amerikana tamin'ny 2017, fandikana 75% isan-taona ny fiakarana.
Momba ny Lodgis Hospitality Holdings
Niorina tao Novambra 2016 avy amin'i Warburg Pincus, VinaCapital, ary mpanorina an'i VinaCapital, Don Lam, Lodgis dia sehatra fandraisam-bahiny tafiditra tanteraka mikendry ny fampandrosoana, fahazoana ary fitantanana ny fananana fandraisam-bahiny Azia Atsimo atsinanana. Anisan'ny niforonany i Lodgis, voa voaangona tany am-boalohany $ 300 tapitrisa ny fanoloran-tena avy any Warburg Pincus sy VinaCapital miaraka amin'ny fananana fandraisana vahiny tsara indrindra toa an-dry Sofitel Legend Metropole Hanoi (The Metropole) sy Fusion Hotels & Resorts, ilay hotely fandraisam-bahiny any Vietnam. Miaraka amin'ny fahazoana ireo hotely roa manan-tantara Raffles ao Phnom Penh ary Siem Reap in Kambodza, Lodgis izao no manana ny portfolio amin'ny trano fandraisam-bahiny manan-tantara lehibe indrindra any amin'ny faritra. Nandritra izay 18 volana lasa izay, Lodgis dia nitombo ny portfolio-ny misy tetik'asa 15 mahery miasa ary eo an-dàlam-pandrosoana any amin'ireo tanàna vavahady lehibe sy toerana itodian'ny mpizahatany iraisam-pirenena manerana ny faritra Indochina.
Amin'ny maha marika feno sy babo azy tanteraka, i Fusion dia mivelatra, manana ary mitantana toeram-pialan-tsasatra amina hotely sy hotely an-tanàna manerana i Vietnam eo ambanin'ny marika Fusion sy Fusion Suites tena be mpitia ary koa foto-kevitra vaovao ao anatin'izany ny Fusion Retreats sy Fusion Originals. Taorinan'ny fahombiazan'ny toeram-pialan-tsasatr'izy ireo, Fusion Maia Da Nang sy Fusion Resort Cam Ranh, Fusion dia manana toerana tokana ho iray amin'ireo orinasa mandray vahiny feno fidirana ao amin'ny faritra izay namela azy hanangana haingana ny heviny sy ny marika manerana i Vietnam.
Ho fampahalalana bebe kokoa, tsidiho azafady www.lodgis.sg.
Momba an'i Warburg Pincus
Warburg Pincus LLC dia orinasam-pananana tsy miankina manerantany mifantoka amin'ny fampiasam-bola amin'ny fitomboana. Ny orinasa dia manana mihoatra ny 44 lavitrisa dolara amerikana amin'ny fananana fananana manokana miankina amin'ny fitantanana. Ny portfolio mavitrika an'ny orinasa maherin'ny 150 dia miovaova arakaraka ny sehatra, ny sehatra ary ny jeografia. Warburg Pincus dia mpiara-miasa efa za-draharaha amin'ireo ekipa mpitantana mikasa ny hanangana orinasa maharitra manana sanda maharitra. Niorina tamin'ny 1966, Warburg Pincus dia nanangona vola 17 an'ny orinasa tsy miankina, izay nanambola mihoatra ny $ 60 lavitrisa amin'ny orinasa 800 mahery any amin'ny firenena 40 mahery.
Ny orinasa dia manana foibe New York misy birao ao Amsterdam, Beijing, Hong Kong, London, Luxembourg, Mumbai, Maorisy, San Francisco, Sao Paulo, Shanghai, ary Singapore. Ho fampahalalana bebe kokoa, tsidiho azafady www.paleftrus.com.
Momba ny VinaCapital
Niorina tamin'ny taona 2003, VinaCapital dia orinasa mitantana fampiasam-bola sy fitantanana fananana manana foibe foibe ao i Vietnam, miaraka amin'ny portfolio isan-karazany an'ny USD1.8 miliara amin'ny fananana eo ambany fitantanana. Ny orinasa dia manana vola mikatona roa mifarana izay mivarotra amin'ny London Stock Exchange: The VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited, izay mivarotra amin'ny Main Market, ary VinaLand Limited izay mivarotra amin'ny AIM. VinaCapital koa dia mitantana ny Forum One - VCG Partners Vietnam Fund, iray amin'ireo Vietnam, ny vola lehibe indrindra mifanaraka amin'ny UCITS misokatra farany, ny Fund Equity Special Equity Vietnam, kaontim-bola maro samihafa ary vola roa ao an-trano. VinaCapital koa dia manana fiaraha-miombon'antoka amin'i Draper Fisher Jurvetson ao an-drenivohitra, ary Warburg Pincus amin'ny fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny. Ny fahaizan'i VinaCapital dia mandrakotra sokajy fananana feno, ao anatin'izany ny tsena renivohitra, ny fananana manokana, ny trano sy ny renivohitra ary ny fidiram-bola raikitra. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny VinaCapital, tsidiho azafady www.vinacapital.com
Ny mpanorina ny Dusit International dia mahazo ny mari-pankasitrahana mandritra ny androm-piainany